जहाँ मन्त्रीहरू जोसँग पनि सिधै यौन प्रस्ताव राख्छन् - Khabar Break | Khabar Break
जहाँ मन्त्रीहरू जोसँग पनि सिधै यौन प्रस्ताव राख्छन्
एकपछि अर्को यौन दुराचारका आरोप आउन थालेपछिअफगानिस्तानका उच्च सरकारी निकायहरू बदनाम हुँदै गएका छन्। अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । यसैमा वेलायती सञ्चार संस्था विविसीले सम्वद्ध महिलाहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उनीहरूले ‘दुराचारको संस्कृति’ रहेको बताएका छन्।
मैले काबुलमै एक पूर्व सरकारी कर्मचारीसँग कुरा गरें। उनी आफ्नो नाम खुलाउन चाहन्नन्, किनकी त्यसले उनलाई अप्ठेरो पार्नसक्छ। तर उनी आफ्नो कथा संसारबाट लुकाउन चाहन्नन्।
उनका पूर्व हाकिम सरकारका वरिष्ठ मन्त्री थिए र तिनले लगातार दुराचार गर्न खोजे। एक दिन त कार्यालय पुग्दा शारीरिक आक्रमण नै खोजे।
‘उनले मसँग सिधै यौन प्रस्ताव राखे। मैले उनलाई म योग्य, अनुभवी भएको भन्दै उनीबाट त्यस्ता व्यवहार कहिल्यै अपेक्षा नगरेको बताएँ। म त्यहाँबाट हिंड्न खोजें। तर उनले मेरो हात पक्रेर कार्यालय पछिल्तिरको कोठामा लान खोजे र भने– एक छिन मात्रै त हो, आउ न,’ ती महिलाले भनिन।
‘त्यसपछि मैले उनलाई ठेलेर मलाई कराउन वाध्य नपार भनें। त्यसपछि हिंडे। म एकदमै क्रुद्ध र निराश थिएँ। मैले अन्तिमपल्ट भेटेको त्यतिबेलै हो,’
त्यसपछि उनले उजुरी गरिन त?
‘अहँ, गरिन। मैले राजिनामा दिएँ। मलाई यो सरकारसँग विश्वास नै छैन। तपाईं अदालत वा प्रहरीकहाँ गएमा थाहा हुन्छ, तिनीहरू कति भ्रष्ट छन्। यहाँ गएर गुनासो गर्ने कुनै सुरक्षित ठाउँ छैन। बोलिहालेमा उल्टै महिलालाई नै दोष दिइन्छ,’ उनले मलाई भनिन।
उनका अनुसार अन्य दुई महिला तिनै मन्त्रीबाट बलात्कृत हुन पुगेका छन्। तर यो दाबी चाहिं विविसीले स्वतन्त्र ढंगले पुष्टि गर्न सकेको छैन।
‘उनले यस्ता काम निसन्कोच गर्छन् किनकी उनी सरकारका प्रभावशाली मानिस हुन्,’ उनले भनिन्।
महिला भएर बाँच्नका लागि संसारमै सबैभन्दा नराम्रो मुलुकमा अफगानिस्तान पनि पर्छ। सन् २०१८ को एक राष्ट्रसंघीय रिपोर्टले यौन अपराध र हिंसाका पीडित महिलाहरूलाई कसरी उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिइन्छ भनेर वर्णन गरेको छ। यो वातावरणमा पीडकविरुद्ध बोल्नु सहज मानिदैन।
यही कारण विविसीले कुरा गरेका ६ जना अफगानी महिलाले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहे। तर ती संवादबाट अफगान सरकारमै यौनदुराचारको सँस्कृति रहेको पुष्टि हुन्छ।
‘यो त एउटा संस्कृति नै भइसक्यो’
म एउटा कार्यालय पुगें, जुन एउटा सानो पार्कको आडैमा छ। अर्की एक महिलाले मसँग आफ्नो कथा सुनाउन चाहिन। उनले एउटा सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिएकी थिइन। सबै हिसावले छनोट भइसकेकी थिइन। तर अन्तमा त्यसलाई टुङ्याउन राष्ट्रपति असरफ घानीका एक निकटवर्ती सहयोगीलाई भेट्नुपर्ने भयो।
‘ती मानिस राष्ट्रपतिसँग देखिन्छन्, तस्वीरहरूमा। उनले मलाई आफ्नो निजी कार्यालयमा आउन भने। उनले भने– आएर बस, म तिम्रो कागजातहरूमा सही गर्छु। त्यसपछि उनी मसँग नजिकिए र भने– आउ न, सँगै पिउँ अनि सम्भोग गरौं,’ उनले भनिन्।
‘मसँग दुईटा मात्र विकल्प थियो, जागिरको प्रस्ताव स्वीकार्ने वा त्यहाँबाट हिंड्ने। मैले स्वीकार गरेको भए, उनलाई पनि रोक्न सक्दैनथें। र, अन्य धेरै पुरुषले मसँग यौनको आश गर्थे। साँच्चै कहालिलाग्दो थियो। म डराएर भागिहालें,’अनि जागिर के भयो त? मैले सरकारी विभागमा फोन गरिरहें, तर हरेक चोटी भनियो–‘मान कि तिम्रो बैंक खातामा पैसा हालिइसकेको छ, तर तिमी त्यसलाई लिन्नौं।’
वातचितकै क्रममा उनी रून्छिन्। ‘यस्ता कुरा सम्झेर म राति निदाउन पनि सक्दिन। साह्रै निराश हुन्छ,’ भन्छिन्।
‘न्यायधिश, न्यायाधिकारी वा अन्य कोहीकहाँ गुनासो गर्न गयो भने तिनैले त्यस्तै प्रस्ताव राख्छन् । यो त यहाँको सँस्कृति नै भइसक्यो। वरपरका हरेक पुरुषले तपाईसँग यौनसम्र्पक राख्न चाहन्छन्,’
अफगानी समाजमा यस्ता घटना या त नभनिकनै टर्छन् वा बढीमा कानेखुसीमा सीमित हुन्छन्। तर गत मेमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारबाट प्रतिद्धन्द्धिमा परिणत भएका जनरल हबिउल्लाह अहमजादीले चाहिं एक अफगान न्युन च्यानलमा यसबारे मुख खोले। उनले अफगान सरकारका वरिष्ठ अधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुले ‘वेश्यावृति’लाई बढावा दिइरहेको टिप्पणी गरे।
यस विषयमा अन्तर्वार्ताका लागि अनुरोध गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गर्‍यो। र, इमेलबाट प्रश्न पठाउँदा पनि जवाफ आएन। उनीहरूले यसअघि जनरल अहमजादीले लगाएका आरोपहरू झुट हुन भनेर दिइएको अभिव्यक्तितर्फ मात्र इंगित गरे।
नर्गिस नेहान नामक एक महिला मन्त्रीले चाहिं टिवट्रमा भनिन्–‘अफगान सरकारकी एक महिला मन्त्री भएका नाताले म विश्वासका साथ के भन्छु भने यी आरोपहरू तथ्यहीन हुन्।
केही समयअघिसम्म सांसद रहेकी महिला अधिकारकर्मी फावजिया कोफीले चाहिं वर्तमान सरकारका उच्चपदस्थबाट धेरै महिलाले यौन उत्पिडन बेहोर्नुपरेको गुनासो आएको बताइन।
‘सरकार एकदम रक्षात्मक छ। यसलाई एउटा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र हेर्न चाहन्छ। खासमा यो समग्र अफगानी महिलाको पीडा हो,’ उनले भनिन्।
‘यहाँ अराजकता, दण्डहीनताको सँस्कृति छ। अपराधी पुरुषहरू सरकारभित्र रहँदा संरक्षित महसुस गर्छन्। त्यसैले उनीहरू यस्ता अपराधप्रति उत्साहित भएका हुन्।’
रुसमा सुनखानीको बाँध भत्किँदा १५ जनाको मृत्यु
ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरूद्वारा अस्वीकृत, प्रधानमन्त्री जोनसनलाई धक्का
कुर्द लडाकू पछि नहटे पुनः आक्रमण थाल्ने टर्कीको चेतावनी
अफगानिस्ताानको मस्जिदमा विस्फोट हुदा ६२ जनाको मृत्यु
राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय बारे सांसदहरुद्वारा आलोचना, जातीय युद्ध हुने आशंका
युरोपेली सामानमा करवृद्धि गर्ने अमेरिकाको घोषणा
नेल्सन मण्डेलाकी छोरी बनिन् दक्षिण कोरियाको राजदूत
गलामा सिक्का अडकिदा गुम्यो १२ वर्षसम्म आवाज, जीवन नै कायापलट
सोलोमोनको द्वीप जसलाई चीनले लियो ७५ वर्षका लागि लिजमा